भारतमा तेस्रो चरणमा कोरोना संक्रमण : नेपाललाई खतराको घन्टी ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७६ साल चैत्र २४ गते, सोमबार १०:५० AM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​ कोरोना अपडेट
एजेन्सी । भारतमा विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा पुगेको छ । नयाँ दिल्लीको एम्स अस्पतालका निर्देशक डा. रणदीप गुलेरियाले भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम्युनिटी अर्थात तेस्रो तहमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनले भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरस तीन चरणमा फैलिने गर्छ । पहिलो चरणमा विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र लाग्छ । दोस्रो चरण ती विदेशबाट आएका व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमा सार्ने गर्छन् । जब तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा एक समुदायले अर्को समुदायमा सार्ने अवस्था आउँछ, तब यो नियन्त्रणमा ठूलो समस्या हुन्छ ।
नेपालमा भने भर्खरै मात्र कोरोनाको संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको छ । तर भारतमा तेस्रो चरणमा पुगेकाले नेपाललाई ठूलो खतरा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अब भारतबाट नेपालमा कोरोना भित्रिन नदिनका लागि सरकारले मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा चिकित्सकहरुको जोड छ । नेपालको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भने अझैसम्म कोरोनाको संक्रमण दोस्रो चरणमा रहेकाले नेपालले समयमै सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
खुला सीमा भएकाले नेपाललाई भारतमा समुदाय चरणमा फैलिँदा ठूलो खतरा हुन्छ । नेपालका विभिन्न नाकाबाट आवत जावत बन्द भए पनि मानिसहरु खुसा सीमा फाइदा उठाएर ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले बेलैमा सबै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती बढाउनु पर्छ ।
भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ९ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या ४ हजार ६७ पुगेको भारत सरकारले जनाएको छ । अहिलेसम्म २ सय ८१ जना भारतमा उपचारपछि घर फर्किएका छन् । भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसका झण्डै ५ सय संक्रमित फेला परेका छन् ।